Chen Lu vitsivitsy mitarika fitaovana fiarovana palitao antsasaky - hasehonao roa - hasehonao - China Shandong Chen Lk
Lead face saron-tava
Lead fingotra taratasy
Mpitovo ampinga PVC MDF
Mobile mitarika apron fitoeran'entana
Single mpitarika lamba efitra lamba
Telo lamba firaka efijery
Wall nitaingina apron fitoeran'entana
Double lamba firaka efijery
Double lamba firaka ambainy
Fiarovana lamba single price
Bed-karazana multifold mitarika ampinga
Vaovao X karazana fiarovana Ray
Soft X ray aman fiarovana
Ultra malefaka X-ray fiarovana
Soft dehibe X-ray fiarovana
Maso ny elektronika mitarika ampinga
Intervenient taratra fiarovana ...
Fiarovana lamba Stainless vy
Soft fiarovana mitarika akanjo lava sy ny tanany ela ...
Chen Lu miaro ny vaovao dia afaka mitarika fingotra Cap amin '...
Ny vaovao firaka karazana fiarovana tranony dia tsy hasehonao
Lu vaovao Chen semi-hasehonao tokan-niandany manohitra-ra ...
Chen Lu vitsivitsy mitarika fitaovana fiarovana palitao antsasaky - hasehonao roa - hasehonao
ara-nofo: Lead fingotra
anjara: Taratra fiarovana
Lead mitovy: 0.35mmpb
4. vaovao iraisam-pirenena miaro mitarika karazana hoditra, ilay mpitarika iraisam-pirenena hiringiriny-hazavana, Ultra-manify, Ultra-malefaka fiarovana ara-nofo; Raha oharina amin'ny olon-tsotra mitarika akanjo, ny havany lanjan'ny 25 ka hatramin'ny 30 isan-jato dia azo nihena.
5. Tsara fiarovana fampisehoana, ny firaka fizarana tena fanamiana, ara-dalàna ny fampiasana ny firaka dia tsy mitovy attenuate;
6. Manomeza 0,35 / 0.5mmPb loha laharana mitovy; Manaova-mahatohitra, mora-to-madio ambonin'ny fitaovana mba hiarovana ny fampiasam-bola ho any amin'ny ambony indrindra araka;
Izany dia vita amin'ny fingotra voajanahary sy mavo danpowder amin'ny alalan'ny fanodinana sy ny OUTSOURCING lamba. Ny afovoan-dia maro sosona miaro vaovao ara-nofo, ny firaka fizarana aza, ny fiarovana bita tsara, sy ny fahazavana ary malefaka, tsy mora ny tapaka;
Ny lamba ivelany dia mateza sy mateza, ary dia tantera-drano sy antistatic. Mora ny Nanadio sy nanisy fanafody.
Izany dia tsara natao, lamaody sy feno samihafa, izay mahatonga anao aina sy aina no fahitana azy.
Product maso fomba (1) ny vokatra notsapaina tamin'ny 80 KVP, 32 Mas, 72 zaridaina halavan'ny eo ambany toe-X-ray sary, ary avy eo dia hitandrina ny sary ny sarimihetsika, ao amin'ny X-ray sarimihetsika, raha ny haben'ny fikandrana, hoy ny vokatry ny sakan'ny ara-nofo, mitelina ny taratra no matanjaka kokoa. (2) raha mbola misy miseho maizina, ny hatevin'ny ny fitaovana ao an-toerana no miova. (3) raha toa ny lelan-maizina toerana mazava, dia mety ho noho ny hanimba ny fitaovana fiarovana anatiny, izay matetika vokatry ny fampiasana diso ny akanjo fiarovana. (4) raha toa misy kely ny toerana maizina, dia novokarina nandritra ny famokarana akanjo fiarovana, toy ny pinhole. Dia voazaha toetra tamin'ny pitsaboana porofo fa ny maizina toerana amin'ny savaivony ny tsy mihoatra ny 5mm tsy mahakasika ny fiarovana vokany. Raha maro ny toerana maizina lehibe kokoa noho ny 5mm hita, na kely maro sy ny toerana maizina ho nahatsikaritra, dia tokony homarihina. (5) raha toa misy aloka lava, dia mampiseho fa loha laharana fingotra mba hamaky ao amin'ny faritra, izay vokatry ny dratsy fitahirizana ny akanjo fiarovana. Vokatra fikojakojana (1) ity dia tsy maintsy entana tsy ho hita ny masoandro, toerana lavitra hafanana loharano, ary tsy afaka mifandray amin'ny hafa vokatra toy ny loko, asidra, alkali, sns (2) izany vokatra dia voatahiry ao amin'ny tsara ventilated ary ny efitra mangatsiatsiaka sy maina. Ny mari-pana dia 0-30 ambaratonga, ary ny Température dia 80%. HC06 anti-manao tokan-misy rindrina mitarika akanjo: faran'izay malefaka fingotra mitarika fomba: na dia mitarika karazana vatana afa-po: 025, 035, 05mmpb; Model: L, M, S; Faritry ny application: ampiasaina amin'ny Taratra aretina ny olona tena fiarovana. Taona ampiasaina: ny firenena manana fotoana raikitra ny 4-5 taona, indrindra ny halavan'ny na ny fampiasana matetika ny fampiasana, ary afaka mijery ny miaro vokatry ny fiarovana amin'ny fitoriana ny azy. Hamarino fomba: mampiasa tanana fisaka mba hikasika na hanala lamba ambonin'ny,-maso hery fandinihana, raha misy ny ampahatelon'ny ny crack, ny vokatra tsy afaka ampiasaina, dia tsy maintsy hisintonany ny fanavaozana. Raha misy fatra detector matihanina dia afaka mamantatra ny halehiben'ny taratra attenuation, dia ilaina ny hamantatra raha vokatra ny fiarovana tokony hosoloana.
Previous: Anti-ray aman solomaso X lafiny / fonony / fanatanjahan-tena fitaratra / 600 manenjana
Manaraka: Dehibe zavatra mba hiarovana ny roa loha laharana niandany coating
0.25mmpb hitarika Clothes Price
Anti Taratra Lead Apron
China Factory Supply Color namboarina X-Ray Hiarovana: Atao hoe Tiroida Collar Fa Tratry
Custom Natao Lead fingotra Nono Fiarovana
namboarina New Design Cheap X Ray Taratra Hiarovana: Lead Apron
namboarina X-Ray Fiarovana Lead Vest
Dental Protective X-Ray Akanjon'ilay
Dental X-Ray tariho Apron
Double mitarika akanjo
tsara Price Lead fingotra X Ray fiarovana rebareba No Sleeve Apron
HD13 Intervenient Taratra Hiarovana: fonon-tanana
High Quality tariho Akanjo
mitarika Apron X Ray fiarovana
Lead akanjo ho an'ny fitaovana nafarana
Lead fingotra Sheet
maivana Lead Aprons
Medical Hiarovana: tariho Hiarovana: Apron
Medical Taratra Protective Accessories Products X-Ray tariho Apron
Medical Rediation Protective Lead Apron fitoeran'entana
Medical X-Ray akanjo fiarovana
ovaire Protective X Ray tariho Apron
fiarovana X -ray firaka apron
Taratra Fiarovana tariho Apron Price
X Ray Lead Akanjo
X Ray Hiarovana: Lead Aprons
X Ray Hiarovana: Lead Clothing
X Ray Hiarovana: Lead Vest
Taratra X Ray Lead Clothes
X Ray Shiled hitarika Hiarovana: Apron fitoeran'entana
X-Ray tariho Apron
X-Ray Tariho Apron For Sale
X-Ray Fiarovana tariho Apron
X-Ray miaro Aprons
X-Ray hiarovana: Akanjo
X-Ray akanjo fiarovana
X-Ray Hiarovana: Lead fonon-tanana
X-ray fiarovana taratra mitarika apron
X-Ray Taratra Protective X-Ray Lead fingotra Sheet
X-Ray fiarovana hitarika Apron
Ny anti-taratra fonon-tanana dia amin'ny rantsan-tànany malefaka ...
Anti-ray aman solomaso X lafiny / fonony / fanatanjahan-tena fitaratra ...
Dehibe zavatra mba hiarovana ny roa-rindrina L ...
Faran'izay malefaka mitarika akanjo lava ara-nofo hasehonao e ...
Faran'izay malefaka sy semi-hasehonao mitarika akanjo dia malefaka Wi ...
Shandong Chen Lu fitaovana mpiara-pitsaboana. LTD